Agreement for Myanmar’s biggest airport project expires
An agreement to design, build and manageanew $1.4 billion international airport in Myanmar has “expired,” according toaYongnam Holdings Ltd.,aSingapore company participating inaconsortium that includes JGC Corp. of Japan.
U Ko Ko Shein appointed as Non-Resident Ambassador of Myanmar to the Republic of Belarus
The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Ko Ko Shein, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Russian Federation, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar concurrently accredited to the Republic of Belarus.
Daw Ei Ei Khin Aye appointed as Non-Resident Ambassador of Myanmar to Timor-Leste
Appointment of UK Ambassador agreed
THE Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the proposed appointment of Mr. Daniel Patrick Brendon Chugg as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Republic of the Union of Myanmar.
Rice law expected to emerge this year
FOR the development of the local rice sector, the Myanmar Rice Federation (MRF) is draftingarice law to be made public this year, according toareport in Myawady Daily.
Vice President U Henry Van Thio inspects elephant conservation camp
(၁၄)ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ -(UPDJC) အစည်းအဝေး ကျင်းပ
(၁၄)ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ(UPDJC) အစည်းအဝေးကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Lee Sang-hwa အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယား သမ္မတ နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Lee Sang-hwaအား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသား လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများ၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ ဆရာတော်များနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သာသနာတော်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တော် ဆက်ကပ်ခံယူမည့် ဆရာတော်များအား နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်း
နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများ၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ ဆရာတော်များနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သာသနာတော် ဆိုင်ရာဘွဲ့တံဆိပ်တော် ဆက်ကပ်ခံယူ မည့်ဆရာတော်များအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော် ဥပ္ပါတသန္တိစေတီတော် ပရိဝုဏ်အတွင်းရှိ သာသနာ့မဟာ ဗိမာန်တော်ကြီး ၌ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင် ကျော်နှင့်ဇနီး ဒေါ်စုစုလွင်၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တက်ရောက်ကြည်ညိုပြီး နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းကြသည်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော ကုလသမဂ္ဂ အထောက်အပံ့ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်အသင်းအဖွဲ့များ၊ အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကုလသမဂ္ဂ အထောက်အပံ့ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင် အသင်းအဖွဲ့များ၊ အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနတို့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့မွန်းလွဲ (၁)နာရီတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချို UNIDO Myanmar Regional Office မှ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံ
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် UNIDO Myanmar Regional Office ၏ Director and Representative ဖြစ်သူ Mr. Stein R. Hansen ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံသည်။
The seventh regular session of the second Pyidaungsu Hluttaw held its 10th-day meeting yesterday morning at the Pyidaungsu Hluttaw meeting hall in the Pyidaungsu Hluttaw building, Nay Pyi Taw.
A JOINT bill committee of the Pyidaungsu Hluttaw held its coordination meeting on the National Tax Bill yesterday afternoon in the second-floor meeting hall of building D of the Pyidaungsu Hluttaw.
DURING his meeting with staff of state-owned newspapers, Deputy Minister for Information U Aung Hla Tun said the duty of newspaper persons was to report news from Myanmar accurately and effectively to the world media, while the duty of the Ministry of Information is to demonstrate the voice of Myanmar.
Grade 5,9 final examinations held in Maungtaw
The basic education final examinations for grade5and grade9are being held countrywide from 19 February in examination centres across the states/regions, while the last subject of the grade9final examination was held in Rakhine State, Maungtaw Town, yesterday morning.
Thai-Myanmar border trade shows increase of $92 million
The value of trade through the Thai-Myanmar border gates reached US$1.26 billion between 1 April and 16 February of the current fiscal year (FY), which is some $92 million more compared with the same period last FY.
India-Myanmar border trade decreases by $9 million
The India-Myanmar border trade was valued at US$70 million between 1 April and 16 February in the current fiscal year, registeringadecrease of $9 million compared with last week.
The following is an interview with Ms. Ellen Goldstein, Director for Myanmar, Cambodia and Lao PDR, World Bank Group at Myanmar Development Effectiveness Roundtable at Myanmar International Convention Center-2 in Nay Pyi Taw yesterday.
Interview with Dr Sean Turnell, Special Economic Consultant to the State Counsellor
H.E. Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor
Union Minister for Defence Lt-Gen Sein Win welcomed the newly appointed co-chairs of the United Nations (UN) Country Task Force on Monitoring
A ceremony to donate 300 tonnes of rice to Sri Lanka’s flood victims was held by the government and the Myanmar Rice Federation (MRF) on 24 February at Pinlekoethwe rice mill in Dagon Seikkan Indistrial Zone.
မြန်မာနိုင်ငံ ဆီစက်ပိုင်ရှင်များအသင်း ပထမအကြိမ် အသင်းသားစုံညီ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး အခမ်းအနား ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံ ဆီစက်ပိုင်ရှင်များအသင်း ပထမအကြိမ်အသင်းသား စုံညီနှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ရာ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချို၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီး ဦးခင်မောင်ကြည်၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဦးဇော်မင်း၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ စားသုံးဆီပညာရှင်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆီစက် လုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ က၀မြို့နယ်အတွင်း ကမ်းပါးပြိုကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကျေးရွာများသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုပြီး ထောက်ပံ့ အားပေးမှုများပြုလုပ်
ပဲခူးမြို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ၀င်းမြတ်အေးသည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းနှင့် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်ဇင်၊
၂၃၀ ကေဗွီ လှိုင်သာယာ-ကျိုက်လတ်မဟာ ဓာတ်အားလိုင်း (၅၂ ဒသမ ၂၆)မိုင် နှင့် (၂၃၀/၆၆/၁၁) ကေဗွီ၊ (၁၀၀)အမ်ဗွီအေ ကျိုက်လတ် ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်လျက်ရှိ
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ၂၃၀ ကေဗွီ လှိုင်သာယာ-ကျိုက်လတ် မဟာဓာတ်အားလိုင်း(၅၂ ဒသမ ၂၆)မိုင် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်၏ တွံတေးမြို့နယ် အပိုင်း တာဝါတိုင်အမှတ်( ၇၂ )သို့ ရောက်ရှိပြီး စီမံကိန်း စခန်းအတွင်း ခင်းကျင်း ပြသထားသော တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်သုံး စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများနှင့် တာဝါတိုင် အမှတ်(၇၂)တွင် ကြိုးဆွဲခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင် မန္တလာဒီဂရီကောလိပ် BTHM (Bachelor of Tourism and Hospitality Management) မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား တွေ့ဆုံ
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်သည် ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ဝန်ကြီးဌာနရှိ ကျောက်စိမ်း ခန်းမ၌ မန္တလေး၊ မန္တလာ ဒီဂရီကောလိပ်တွင် ပညာ သင်ကြားနေသော ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ - BTHM) အထူးပြု ပထမနှစ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား တွေ့ဆုံသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ကျင်းပသည့် Partnership Summit 2018 သို့ တက်ရောက်
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးနှင့် အဖွဲ့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အန်ဒရာပရာဒက်ရ်ှပြည်နယ်၊ Visakhapatnam မြို့၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိ ကျင်းပသည့် Partnership Summit 2018 သို့ တက်ရောက်လျှက်ရှိသည်။
UMFCCI, MIA hold meeting on electricity and energy sector
THE Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce (UMFCCI) and the Myanmar Industries Association (MIA) heldacoordination meeting on the electricity and energy sector yesterday in UMFCCI, Yangon.
Union Minister Dr. Pe Myint attends meeting on publishing 100 Myanmar books
The sixth coordination meeting for publishing the 100 Myanmar Books Series was held yesterday at the Printing and Publishing Department (PPD) meeting hall in Theinbyu Street in Yangon, where Union Minister for Information Dr. Pe Myint deliveredaspeech.
The third Director General Level Bilateral Meeting between Myanmar and India on Drug Control Cooperation , was opened at the Park Royal Hotel in Yangon on 23 February 2018.
Senior General Min Aung Hlaing and officials went to Kyauktaw Gyi Pagoda on the hill at Min Dhamma to view the progress in the construction of Thirimingla Maha Sasana Beikman Taw at Insein Township in Yangon yesterday afternoon.
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ အသင်းနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ အသင်းနှင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၊ ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပသည်။
၁၃ ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးမှူး အသင်း ညီလာခံ ကျင်းပ
(၁၃)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ညီလာခံကို ဖေဖော်ဝါရီ (၂၄)ရက်နေ့၊ နံနက် (၉)နာရီတွင် သူနာပြုတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် ကျင်းပရာ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး တက်ရောက် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။